Booqashadaydii Buuhoodle !! – W/Q: Ridwaan-Akiid
Buuhoodle Waa Deegaan taariikhi ah oo caan ka ah mandaqada geeska afrika waa deegaanada aadka looga tix galiso dhaqashada geella iyo suugaanta.
Bulshada jiidaha buuhoodle ku dhaqani waa xoolo dhaqato soo jireen ah aadna u jecel hidaha iyo dhaqanka Somaalida waa dad intooda badani ku xidhan tahay noloshoodu xoolaha nool dhaqashadooda iyo manaafacaasdigoodaba.
Buuhoodle markaad maqasho waxaad xasuusanaysaa Gabayada Somalidu isku tiri jirtey oo meelo badan ay kaga jirtey buuhoodle waxaana jiidahaas ku dhashey hal abuur mahadhooyin badan oo suugaan ah dunida kaga tagey.
Gobolka Buuhoodle waxa uu ka mid ahaa deegaanada Somaliland ee aanan arkin anigoo gaashaan qaad ah balse nasiibku waxa uu ii saamaxay allena ii suurto galiyay in aan u safro labaatankii bisha Sagaalaad ee sanadkan (20/09/2017) Anigoo u tagey Geerida abtigey oo Magaaladda Buuhoodle ku geeriyoodey alle ha u naxariistii Marxuun Maxamed Cabdilaahi Ducaale oo ku magaca dheeraa MAXAMED GADHWEYNE Oo xaqii alle ugu yimi gudaha buuhoodle laguna aasey.
Buuhoodle waxaa deegaan ahaan ka soo jeeda abtiyaashey.
Wakhti ku beegaan 9-kii Habeenimo ayaa buubuur khaas ah ka kaxaysanay Caasimada Hargeysa anigoo u sii jeedna buuhoodle habeenkii oo dhan jidkaanu sii miranaynay waagu waxa uu noogu baryay duleedka bari ee magaalada Caynabo jidka dheer ee isku xidha burco ilaa laascaanood waxaanu kaga dagney meel u dhaxaysa deegaanadda OOG iyo GUUMAYS jidka rafka waanu ku jirney ku dhawaad lix saacadood Waxaanu buuhoodle gaadhney maalintii danbe 11 Duhurnimo taas oo ka dhigin in aanu Hargeysa iyo Buuhoodle u kala safreynay wakhti dhan 14 Saacadood oo xidhiidh ah.
Buuhoodle sidaa uma foga oo waa hawdka gobolka togdheer balse waxaa loo maraa jid dheer oo wareeg ah sababatuna waxay tahay waxaa xidhan jidka isku xidha degaanadda Qorilugud iyo Buuhoodle xidhnaanshiyahaas oo ay keentey Colaad dhex martey labada beelood ee deegaanada ku dhaqan.
Bulshada reer buuhoodle waxay ku jiraa xaalad ay adag tahay marka loo soo safrayo khudrada iyo ganacsiga qawtal daruuriga ah Qaadka amaJaadka bulshadu isticmaasho waxaa u keenta diyaarada maadaama safarka dhulku wakhti badan uu qaadanayo taasina waxay kaantey in maceeshadu qaali noqoto.
Todoba maalmood ayaa joogey magaalada buuhoodle markaan bulshada u kuur galey waxaa iiga dhex baxay in sixir barar uu deegaanka ka jiro waxaana loo sababeeyaa sixir bararkaa colaada iyo abaarta deegaanka ku soo noqo noqota.
Buuhoodle waxaa laga qaataa dhawr nooc oo lacag ah sida Lacagta cadcadka loo yaqaan Dollar, Birta Ethopia-ka iyo Adeega Zaadka.
Intaas oo lacag ahi waxay sababaysaa kor u kaca sarifka lagaha oo xidhiidh wayn la leh ganacsiga aas aasiga ah.
Magaaladdu waa mara xadh wey dhisan tahay ganacsi xoogan baa ka socda buuhodle deegaanadda ay maamusho dhirta iyo deegaanka aad baa loo ilaaliyo oo kaymo jiq ah ayaa magaalada ku hareeraysan roobkuna wuu ka da’yay oo barwaaqo bilowgeed bay ku jireen.
Buuhoodle dadka aan arkini waxay aaminsan yihiin in ay tahay meel khatar ah oo dadka lagu laayo balse xaqiiqdu sidaa ma ah oo deegaan imika nabdoon oo xasilooni ay ka jirto dadkuna waxay kala aaminsan yihiin siyaasado kala duwan.
Buuhoodle waad ka helaysaa adeegkasta oo bulsho aad u baahato Waloow ay jirto dib u dhac badan oo bulshooyinkaa haysta sida waxbarashada caafimaadka iyo horumarka guudba reer buuhoodle waxay u baahan yihiin in ay ku dadaalaan sidii ay bulshadooda horumra ugu horseedi lahaayeen ugana bixi lahaayeen nolosha imika ay ku jiraan.
Qalinkii Suxufi Ridwaan Caydiid Ismaaciil (Akiid)
Email: akiid14@gmail.com ama Ridwaan_akiid@hotmail.com
Previous: “Ma Maanta Ayay Taagan Tahay In Odayaasheenii Qabriyadooda La Iibiyo….” Sheekh Aadan-Siiro
Next: SAWIRRO: 50 Qof Oo Lagu Dilay Dalka Maraykanka